I Yini odinga ukukwazi mayelana PWM kulokolokoza? - 💡💻 Iris - Software sokuvikelwa Eye, Impilo kanye Ukukhiqiza 🛌👀
I Yini odinga ukukwazi mayelana PWM kulokolokoza?
A-FAQ esheshayo mayelana imibuzo ejwayelekile mayelana PWM kulokolokoza, ngoba ngezinye izikhathi kungase wayephambanisa lonke ulwazi laphaya.
Bhala kimi endaweni ethile uma umbuzo wakho awuphendulwanga futhi ngiyophendula bese ungeze impendulo lapha 🙂
Ingabe qapha yami kulokolokoza?
Esikhathini esiningi yebo. Lokhu kuncike ekutheni umengameli yakho isebenzisa PWM noma i-DC Ukufiphala.
Kuyini PWM kulokolokoza?
Abanye abakhiqizi zisebenzisa ukushintshashintsha kwezwi ishayela-ububanzi ukulawula ukukhanya qapha.
Kuyini Pulse-ububanzi ukushintshashintsha kwezwi?
Ngokuyinhloko bajikela le LED kwasemuva ON futhi OFF.
Kungani lo okungenampilo?
Amehlo akho uqale ungenwa kanje
Futhi uthola iso umthwalo nobuhlungu iso.
Indlela ukulungisa le?
Setha qapha Hardware wakho ukukhanya ukuze 100% usebenzisa qapha yakho izinkinobho.
Abaqaphi Iningi ungayisebenzisi PWM at ukugqama esiphezulu.
Kwenzekani uma ukukhanya yami isethelwe 80%?
qapha yakho ingasebenzisa PWM
Kwenzekani uma ukukhanya yami isethelwe 50%?
Kwenzekani uma ukukhanya yami isethelwe 100%?
qapha yakho cishe akasebenzisi PWM futhi ungatholi le ON futhi OFF into futhi iso umthwalo.
akulona 100% ukugqama okungenampilo?
Yebo uma ikamelo lakho ukukhanyisa ziphansi.
Ukuze engcono ukuvikelwa iso futhi okungenani inani iso umthwalo nobuhlungu iso, qapha yakho akufanele sibheke umthombo wokukhanya egumbini.
Kufanele ukufanisa ukukhanya egumbini hhayi ibukeke umthombo wokukhanya.
100% ukukhanya egumbini elimnyama kubi?
futhi 50% ukugqama, Ngingathola nakakhulu ubuhlungu iso?
Yebo, uma qapha yakho isebenzisa PWM.
Khona-ke yini okufanele uyenze?
Iris ungakwazi ukulawula ukukhanya qapha ngaphandle kokusebenzisa PWM.
Angifuni-ke, yini enye?
Khanyisa izibani egumbini sonke isikhathi futhi usebenzise ukuqapha yakho nganoma ukugqama esiphezulu.
Ngithanda Egumbini elimnyama, yini enye?
Ungathenga qapha ezinye entsha okuyinto kulokolokoza-free noma usebenzise Iris.
Ngakho okufanele ngisebenzise Iris at ukugqama esiphezulu?
Ayikho, Iris ukukhanya enempilo futhi akasebenzisi PWM.
Ungasebenzisa noma value ofuna nge-Iris, kodwa qapha hardware yakho ukugqama kusuka izinkinobho kuhle ngesikhathi 100%.
Kungakuhle, ukufanisa ukukhanya nge Iris ekamelweni lakho ukukhanyisa.
Ngakho mina ngeke uthole ubuhlungu iso uma Iris isethelwe 50% ukugqama?
Ingabe ngithola ubuhlungu iso uma Iris isethelwe 40% ukugqama?
Ingabe ngithola ubuhlungu iso uma Iris isethelwe ukukhanya ongaphakeme?
Uma ekamelweni lakho kuxhopha ngempela futhi qapha yakho ukugqama simnyama ungase uthole ubuhlungu iso.
Zama ukufanisa Igumbi ukukhanyisa ukuba ukukhanya kwesikrini.
Uma ukukhanya isethelwe 150% kusukela Iris Ngizofika kulokolokoza kancane?
Kuyoba fana njengoba phi nye Inani.
Iris Awukwazi ukushintsha hardware kodwa ungasusa kulokolokoza PWM lapho ukulawula ukukhanya.
Lapho kwasemuva Hz ingaphansi kukhona ngaphezulu iso umthwalo?
Yebo, une amakhefu ezinkulu phakathi ON futhi OFF futhi izivumelwano iso lakho ngaphezulu.
Yebo, une amakhefu ezincane ngempela noma kukhona nje kungekho amakhefu usekukhanyeni amehlo akho musa ungenwa.
Uyini umgomo wethu for Eye impilo?
Ngokuyinhloko, umgomo wethu abe njalo ukukhanya ezingeni lapho akunakwenzeka nge LED noma ephakeme kakhulu Hz izinga nge LED.
Lower Hz izinga kufana turning igilobhu egumbini ON futhi OFF sonke isikhathi.
Ingabe akukho kulokolokoza 0 imvamisa Hz?
Ayikho, sikubiza kulokolokoza lokhu ON futhi OFF.
Ngokuyinhloko, e ngabaqaphi, ulwela for the enkulu Hz kungenzeka aphansi iso umthwalo.
Ngo E-ink, unayo 0 imvamisa Hz kodwa ubuchwepheshe ihlukile.
0 Hz kungekho kulokolokoza kodwa awukwazi ube le nto nanoma yimuphi umthombo wokukhanya.
Ungathola 0 Hz kusuka incwadi noma ezinye into ngokomzimba nedwala.
Ngididekile, okufanele ngikwenze?
Setha qapha hardware ukugqama kuya-MAX kusuka izinkinobho qapha futhi asebenzise Iris ukulawula ukukhanya.
Ingabe kufanele ngisishiye phansi ngabaqaphi ngokuphelele?
Awu, lokhu isixazululo esingcono kodwa ngempela kanzima ezweni lethu ubuchwepheshe kanye electronic amadivayisi ngokuphelele.
Awu, kokubili babevela izinto kagesi kodwa alukho uxhumano enkulu.
Ingabe zonke qapha ukusetshenziswa PWM?
Ayikho, kodwa eziningi zazo, omunye ngabaqaphi zisebenzisa into ebizwa DC Ukufiphala.
Kuyini DC Ukufiphala?
Esikhundleni sokusebenzisa amakhefu iDemo ukulawula ukukhanya kanje
Wena ukushintsha DC kanje
Futhi lokhu akakubangeli kulokolokoza.
Ngakho DC Ukufiphala akusho ukulotha?
Awu, nakhu subpixel kulokolokoza futhi zonke izinhlobo nezinye izinto kodwa akasebenzisi PWM ukulawula ukukhanya.
DC Ukufiphala ungcono PWM.
Ingabe Iris wenza okufanayo njengoba DC Ukufiphala?
Yebo, kodwa Iris kushintsha Ngokuphambene kancane ngakho DC Ukufiphala kungcono.
Nokho, uma ungafuni ukuchitha imali eningi ukuze qapha amasha futhi ufuna ezishintshayo Iris kungcono.
Zama Iris for a couple of days and see if it helps you with eye pain and sleep problems.
Uma kungaqali ungahlala ukuyisusa nge 2 ukuchofoza.
CEO Iris Technologies
usuku Publishing: 15.05.2018
Posted in Izihloko, PWM